नगरको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छौं
सुरेश अधिकारी, नगर प्रमुख,शारदा नगरपालिका, सल्यान
सल्यानको सदरमुकाम समेत रहेको शारदा नगरपालिका ‘समृद्ध नगर, सुखी नगरवासी’ अभियान सहित अघि बढेको छ । उक्त अभियान सार्थक बनाउन प्रविधियुक्त नगर, जनमुखी सार्वजनिक सेवा र सहभागितामूलक विकासका क्रियाकलापलाई मुख्य आधार मानिएको शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, नगरको कार्यप्रगति, विकास निर्माण, भावी योजना लगायतबारे आर्थिक अभियानका सल्यान संवाददाता बुद्धिमान पुनले नगरप्रमुख अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं निर्वाचित भएर आएपछि नगरवासीले महसूस गर्नेगरी गरिएका विकासका काम के के हुन् ?
हामी निर्वाचित भएर आएको २ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा पहिलो काम त आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गरेका छौं । रू. ५ करोड ८० लाख लागतमा पक्की पुल निर्माणमा जोड दिएका छौं ।
सबैभन्दा बढी खानेपानीको समस्या भएको ठाउँमा खानेपानी पुर्‍याएका छौं । नगरपालिकाभित्र बनेका बाटोहरू सुधारका साथै पार्क निर्माण गरेका छौं । खलंगा बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाएका छौं । सबै वडामा बाटो पुर्‍याउने काम लगभग पूरा भएको छ । जिल्ला अस्पताललाई ५० शøयाको बनाउन पहल थालेका छौं । विद्युत् नपुगेको ठाउँमा विद्युत् पुगेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई चाडपर्व खर्च प्रदान गरेका छौं । यस्तै लक्षित वर्गका लागि विभिन्न तालीम सञ्चालन गरेका छौं ।
गत आर्थिक वर्षमा हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै काम गरेका छौं । खानेपानी योजना, विद्यालय भवन र केही स्वास्थ्य चौकीका भवन बनाएका छौं । मोटरबाटोको स्तरोन्नति गरिएको छ । बसपार्कमा रहेको मातपोत कार्यालयको भवन भत्काएर उद्यान निर्माण अगाडि बढाएका छौं । समग्रमा पूर्वाधार विकासमा सन्तोषजनक काम भएका छन् ।
विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती के के छन् ?
विकास बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती र समस्या छन् । तर ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढेका छौं । यसमा पहिलो त योजना छनोट विवादित हुने गरेको छ । नगरका १५ ओटै वडाको जहाँ विकास भए पनि समग्र नगरको विकास हो भन्ने बुझाइ नभएकाले केही समस्या देखिएको छ । अर्को, उपभोक्ता समितिमा बस्न हानथाप हुने गरेको थियो । अहिले यी समस्यामा केही सुधार भएको छ ।
हामीले यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रण गरेका थियौं । हिजोको दिनमा बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने र बीचमा छाड्ने अवस्था थियो । अहिले त्यसमा सुधार आएको छ । शिक्षक अभाव भएको ठाउँमा नगर शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं । नपढाउने शिक्षकमाथि कारबाही समेत भएको छ । विद्यालयका जीर्ण भएका भवन मर्मत सम्भार गरेका छौं । बालबालिका विद्यालय पुगे–नपुगेको थाहा पाउन अनुगमन तीव्र बनाएका छौं । नगरभित्रका शिक्षकलाई तालीमको व्यवस्था गरेका छौं ।
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार गरेका छौं । नगरपालिका भित्रका सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक खोलेका छौं । जिल्ला अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापन गरेका छौं । नगरपालिकाले आफै औषधि किनेर वितरण गर्दै आएको छ । १५ शय्याको जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउँदै छौं । रू. ४ करोड लागतमा अस्पताल भवन निर्माण भइरहेको छ ।
नगरका सबै वडामा साना साना बजार छन् । ती बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो श्रीनगर बजार खलंगाको व्यवस्थापनको काम काम गर्दै आएका छौं । बजार क्षेत्रमा आपराधिक वा अप्रिय घटना हुन नदिन सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका छौं । सडकमा सौर्य बत्तीको प्रबन्ध मिलाएका छौं । यस पटकदेखि श्रीनगर बजारमा हाटबजार लगाउने काम अगाडि बढाएका छौं । यस्तै बजारको फोहोर व्यवस्थापन, नाला सफाइ लगायत काम पनि गर्दै छौं ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध खैरावाङ भुवनेश्वरी मन्दिर शारदा नगरपालिकामा पर्दछ । मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै छौं । यसका लागि सरसफाइमा ध्यान दिएका छौं । खानेपानी र मोटरबाटोको सुविधा पुर्‍याएका छौं । यस वर्षको घटस्थापनाको दिनसम्म सक्नेगरी उक्त मन्दिरसम्मको सडकमा डबल कटिङको काम थालेका छौं । धर्मशाला निर्माणको काम पनि हुँदै छ । माल्नेटाको अदुवाको प्रवर्द्धन र सल्यानी खुकुरीको बजारीकरणका लागि सहयोग गरेका छौं ।
निर्वाचनको बेला भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यो अभियान अहिले कहाँ पुग्यो ?
हो । चुनावको बेला घोषणापत्र जारी गर्दा पनि भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाउँछौं भनेको थिएँ । यसैलाई आधार मानेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेको छु । हिजोका दिनमा नापी, मालपोत लगायत कार्यालयमा पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने जनगुनासो आउने गथ्र्यो । म जनप्रतिनिधि भएर आएपछि नापी कार्यालयको एक कर्मचारी र शिक्षाको एकाइ प्रमुखलाई पनि घुससहित पक्राउ गरेका छौं । अहिले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी अड्डामा धेरै सुधार आएको छ ।
जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहँदा नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ केही आइपरेका छन् ?
पहिलो वर्ष त समस्या धेरै आएका थिए । कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था र कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले कानून बनाएर काम गदै जाँदा अप्ठ्यारो महुसूस भएको छैन । कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन सबैले सहयोग गर्नुभएको छ । हामी सबै अहोरात्र खटिएर नगरको विकासमा लागिपरेका छौं ।